သုဝဏ္ဏVIP II မြေကွက်ရောင်းမည်
-လိပ်စာ : ပေါ်ဆန်းေ...
Ad Number S-7353056
Ad Number S-7352705
Ad Number S-7352121
(35'x80')အကျယ်၊ တာမွေ၊ (164)လမ်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး 3½RC ရောင်းရန်ရှိ
တာမွေ၊ 164-လမ်း - (35'x80')အကျယ် - Master Bed Room(5)ခန်း - Single Bed Roo...
Ad Number S-7351647
Ad Number S-7351001
ပြည့်စုံ(Yangon House) အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှု Close
SH10-002337, For Sales House, ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် (ကားပါကင် ၂စီး) အပါ လုံးချင်းအိမ် (၂ထပ်) ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Located Area = Shwe Thit Sar Street, Yankin Tsp Land Space = 30’x70’, 0.0...
Ad Number S-7349139
လှိုငျမွို့နယျ၊ ခပေါငျးအိမျရာမှ အခနျးတဈခနျး အမွနျရောငျးမညျ။
ရနျကုနျအငျးစိနျလမျးမအနီး ၊ သံရုံးအနီး၊ ကနျဘောငျအနီး......
Ad Number S-7348620
Yonemitharsu Realestate Service Co.,Ltd Close
မရမျးကုနျး ရှနှေငျးဆီ လုံးခငျြးအရောငျး
Ad Number S-7369264
1250 Sqft ၁ လွှာ အင်းစိန်လမ်းနောက်ကျော ၊ လှိုင်
01- 375574, 01- 381990
Ad Number S-7369237
1026 Sqft ၁လွှာ ၊ သုမင်္ဂလာလမ်းဒဲ့ပေါက် တောင်ဥက္ကလာ
Ad Number S-7369221
လှိုငျ GEMS Condo အခနျးအရောငျး
Ad Number S-7369198
Ad Number S-7369175
Ad Number S-7369167
950 Sqft ၄ လွှာ ၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာ
660 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7369139
​ရေ​ကျော်​လမ်းမ၊ ပုဇွန်​​တောင်​၊ 18'x65'၊ (6)လွှာ၊ BR-3,A/C, ပါ​ကေးခင်းပြီး ​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​။
Ad Number S-7369083
Ad Number S-7369060
Ad Number S-7369031
တက်နေဝန်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် Close